Andiana 1870 Dragon® Dredge - Dredge Ellicott
Ny dredge an'ny cutterhead an'ny Series 1870 Dragon® dia zaridaina madinidinika amin'ny habeny izay manana fitrandrahana tsy manam-paharoa tsy manam-paharoa izay ahafahana mihady mahomby manomboka amin'ny 5 ft (1.5 m) ny halalin'ny fihadiana. Ankoatr'izay, ity dredge suction cutter ity dia misy paompy drakitra sy vondrona fanampiny, izay ampiasain'ny motera mahaleo tena roa ho an'ny famokarana miasa be ao anatin'ny faritra iasana.
Ity maodely ity dia matetika ampiasaina amin'ny fampiharana toy ny fitrandrahana ny renirano, ny famerenana amin'ny laoniny ny morontsiraka, ny fanavotana ny tany, ny fananganana nosy ary ny fifehezana ny tondra-drano.
Miaraka amin'ny halavan'ny indostrian'ny indostrialy, ny 1870 dia manolotra savaivony lehibe kokoa ho an'ny fanatsarana ny famokarana isan'ora.
Niorina tamin'ny volavola goavambe efa voaporofo ara-potoana sy rafitra fanaraha-maso elektrônika-hydraulic i Ellicott, ny 1870 dia dredge ankafizin'ny toe-tany lavitra sy tropikaly.
Safidy feno feno azo ampiasaina, ao anatin'izany ny rafitra fametrahana GPS miorina amin'ny GPS.
Haben'ny famoahana: 20 ″ x 20 ″ (500 mm x 500 mm)
Main Engine Caterpillar 3512: 1,280 HP (955 kW)
Enina mpanampy Caterpillar C-15: 475 HP (354 kW)
Ny halalin'ny dredging farany ambany: 50 ′ (15 m)
Crane fikirakirana paompy
Rindrambaiko fanaraha-maso GPS
Mast miaraka amin'ny famantarana famantarana
Atsipazo ny kiho mihodinkodina
Ny vatofantsika dia mitobaka na kalesin'ny spud